Waad La Yaabi Kartaa Kuwa Tixraaca B2B Xidhmaya | Martech Zone
Waad La Yaabi Kartaa Kuwa Tixraaca B2B Ay Xidhayaan
Isniin, Janaayo 5, 2015 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Mashiinka wax iibinta ee shirkad kasta oo B2B ah waa inuu noqdaa mid hagaagsan, saliid leh, oo xawaare buuxa ku socda si uu dhab ahaantii isbeddel ugu sameeyo khadka hoose. Waxaan aaminsanahay in shirkado badan ay si fudud u dhibaatoodaan sababtoo ah waxay ku tiirsan yihiin ganacsi cusub iyada oo loo marayo wicitaano qabow, laakiin shaqaalahoodu ma lahan koox sax ah oo meel u qabata shaqada adag si loo gaaro guul.
Agaasime guud ayaa dhowaan ila wadaagay Iibinta iyo Metrics Suuq-galka loogu talagalay barnaamijka softiweerka ah ee shirkadaha Adeegga ah ee Iskaashatada Insight Venture - lambaraduna way kaa nixin karaan. Waxay qaadataa hal tan oo shaqo si loo helo macmiil cusub. Ma yeelan kartid koox aan imaanaynin shaqo orod maalin kasta oo aad filan karto inaad isbeddel sameyso.
Mise waad sameyn kartaa Waxaa jira hal il oo ganacsi B2B ah oo aad uga sarreeysa wax kasta oo kale oo laga yaabo inaadan ka faa'iideysan.
Marka lagu falanqeynayo heerka beddelashada kanaalka, hal kanaal ayaa u soo ifbaxa inuu yahay guuleyste cad. U diritaanka macaamiisha iyo shaqaalaha waxay dhaliyaan 3.63% sicirka beddelka, ku dhowaad labanlaab kanaalka ku xiga - websaydhyada leh 1.55% heerka beddelashada. Bulshadu waxay leedahay 1.47% sicirka beddelka iyo raadinta lacag bixinta ee 0.99%. Kanaallada ugu waxqabadka xun ayaa ah liisaska hogaaminta oo leh 0.02% heerka beddelashada, dhacdooyinka leh heerka beddelaadda 0.04% iyo ololeyaasha emaylka ee leh 0.07% heerka beddelaadda. Gilad Raichstain, Diidmada.
Marwalba waan la yaabnaa markaan lahadalno wada-hawlgalayaasha xallinta inbadan oo kamid ahna maheystaan ​​barnaamij meesha kajira oo abaalmarinaya midkood shaqaale ama macaamiil tixraac. Shaqaalahaagu waa (ama waa inay noqdaan) horyaal u ah ganacsigaaga - waxay kugu xayeysiinayaan shabakadahooda. Macaamiishaadu waa ilo kale oo layaableh. Ma haysaa emayl soo baxa xilliyo-weydiin ah haddii ay rabaan inay cid u diraan? Ma siisaa abaalmarino ama lacag kaash ah gudbintaas? Xogtaan waxay kaa dhigi kartaa inaad bilowdo!
Uguyaraan, haysashada bog degitaan oo soo qabanaya ilo leh xiriiriyeyaal gaar ah oo loo qaybiyo shaqaalahaaga, macaamiishaada, iyo la-hawlgalayaashaadu waa inay ahaadaan kuwa ugu sarreeya mudnaantaada. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad raadiso oo aad abaalmariso gudbintaada ugu wanaagsan!
Diidmada u cusbooneysiiyaa rajadaada iyo isgaarsiinta macaamiisha rikoodhka ku habboon ee CRM, oo kuu oggolaanaya inaad maareynaysid dhuumahaaga si wax ku ool ah adoo badbaadinaya adiga iyo kooxdaada waqti qiimo leh oo ku saabsan hawlo daal badan. Implisit waxay isticmaashaa algorithms oo tilmaamaya emayl kasta, xiriir iyo dhacdo taariikheed kuna habboon fursada saxda ah - 100% si otomaatig ah.
Tags: b2bheerarka b2bgudbinta b2biibinta b2bGilad Raichstainfulin
Waa maxay sababta Infographics-ka ay u tahay Gebi ahaanba Suuqgeynta
Maalinta jacaylka 2015 images
Wow qoraal aad u fiican Waxaad wax walba ku sharaxday si aad u wanaagsan. Mahadsanid
Agoosto 20, 2015 saacaddu markay ahayd 10:53 PM
Doug, Waxaan ka hirgaliyay barnaamij tixraac kooxdayda sannadkan (2015). Waxa ugu fiican ee aan abid sameeyo. Waa barnaamij quruxsan oo fudud. Marka mid ka mid ah xubnahayga kooxdu uu macmiil cusub u keeno faylalkayaga, waxaan ku abaalmariyaa shaqaalahaas 5% dhismaha websaydhka. Marka, tusaale ahaan haddii ay tixraacayaan $ 10,000 mashruuc degel ah, markaa waxay heli doonaan $ 500 gunno ah. Kooxdaydu ma jeceshahay barnaamijkan? Duh! Haa, way jecel yihiin.
Agoosto 21, 2015 saacaddu markay ahayd 1:02 PM
Taasi waa cajiib Greg! Waxaan jecel nahay barnaamijyada gudbinta. Dadka qaar waxay u maleeyaan inay tahay dhaqan yaab leh, laakiin shirkadaha ayaa lacag siiya dadka wax iibiya markasta si ay uga caawiyaan wadista ganacsiga… maxaad u bixin weyday lamaanayaashaada iyo shaqaalahaaga?